Somaliland Oo Diiday Xubno Soomaaliya U Magacowday Wada-hadallada – HCTV
Somaliland Oo Diiday Xubno Soomaaliya U Magacowday Wada-hadallada
Cabdiqaadir Carab 0	July 18, 2019 4:10 pm
Safaarada Maraykanka Ee Addis Ababa Oo Digniin Soo Saartay
Afghanistan: Qarax Lala Beegsaday Masaajid Oo Ay Ku Dhinteen 62 Qof
Somaliland: Xayiraadda HCTV Iyo Xadhigga Tifaftiraha Guud Oo La Cambaareeyay
Weerar Lagu Dilay 71 Askari Oo Ka Dhacay Dalka Niger
Hargeysaa (HCTV) – Xukuumadda Somaliland ayaa Gef siyaasadeed ku tilmaantay Guddi ka kooban lix xubnood oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland oo Madaxweynaha Soomaaliya u Magacaabay Wada-hadallada Somaliland.
War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland oo soo gaadhay HCTV ayaa lagu sheegay inaan Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya dhacaynin illaa Soomaaliya garwaaqsato in Midnimadii Soomaaliya burburtay 1991-kii.
War-saxaafadeedkaasi oo dhamaystiran ayaa u qornaa sidan “Guddida uu shalay magacaabay madaxweynaha maamulka Muqdisho nuxurka hawsha uu u igmaday waxaay ahayd laba qodob, kuwaas oo kala ah:
Jamhuuriyadda Somaliland tabashadeeda iyo dhibtii soo gaadhay waxay kaga garnaqsan kartaa oo keliya fagaare caalamiya oo bulshada caalamku ay goob-joog ka tahay balse maamulka cadawga ah ee farmaajo xalin tabasho nagama dhaxayso, ee garnaqsi laba dal ayaa noo dhexeeya. Caqliga saliimka ahina wuxuu dhigayaa inaan cadowga loo caban ee layska celiyo.
Qodobkiisa labaadna wuxuu u dhignaa xaqiijinta mabaa’diida Federal-ka.
Jamhuuriyadda Somaliland ma quseeyo hawlaha Federal-ku, dib u xasuuso taariikhda 1960-kii waxaynu ahayn laba dal oo kala madax bannaan caalamkuna aqoonsan yahay, islamarkaana ku midoobay baadi-goobka shantii Soomaaliyeed, balse 1991-kii midowgaasi wuu burburay, illaa 1991-kiina waxa aynnu nahay laba dal oo kala madax-bannaan, waxaana tihiin Federal-ka Soomaaliya, annaguna waxannu nahay Jamhuuriyadda Somaliland, idinka ayuu Federal-ku gaar idiin yahay.
Haddaba, Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay qabsoomi karaan keliya marka ay Soomaaliya garwaaqsato in midnimadii labada dal ay burburtay 1991-kii, illaa maantana aynu nahay laba dal oo kala madax-bannaan muddo 28-sanno ah jaarnimo kaliya wadaaga.”
Puntland Oo Ku Gacan-Saydhay Guddida Somalia U Magacawday Wadahadalada Somaliland